Mintigo: Dhibcaha Lead-ka ee Saadaasha Shirkadda | Martech Zone
Markaan nahay suuqleyda B2B, dhamaanteen waan ognahay in lahaanshaha nidaamka dhibcaha hogaaminta si loo aqoonsado hogaaminta iibka-diyaarka ah ama iibsadayaasha suurtagalka ah inay muhiim u tahay socodsiinta barnaamijyada abuurka dalab guulaysiga iyo ilaalinta dayactirka suuq-geynta iyo iibka. Laakiin hirgelinta nidaamka dhibcaha hogaaminta ee run ahaantii shaqeynaya waa ka sahlan tahay in la yiraahdo intii la qabtay. Iyadoo Mintigo, hadda waxaad yeelan kartaa moodello dhibco hoggaamineed keenaya awoodda saadaalinta Analytics iyo xog weyn oo kaa caawinaysa inaad dhakhso u hesho iibsadayaashaada. Mar dambe malayn maayo.
Mintigo wuxuu ahaa wade qaab cusub oo cusub dadaalka jiilkeena hogaaminta. Heather Adams, Maareeyaha Suuqgeynta ee netFactor
Dhibcaha Hogaaminta Mintigo ee Saadaalinta waxay u suurta galisaa suuqleyda shirkadaha inay ku daraan awooda suuq geynta saadaalinta dhibcaha hogaanka.
Sidee Mintigo u saadaalinayaa Dhibcaha Lead
Mintigo wuxuu ka bilaabmaa waxaad ogtahay, ka faaideysiga CRM-gaaga iyo xogta otomaatigga suuqgeynta.
Waxaad u badan tahay inaad wax ka ogtahay waxyaabaha ku saabsan raadadkaaga: Waa kuwee ololeyaasha ay soo arkeen, halka ay guji iyo waxa ay ku buuxiyeen foomkaaga. Waxaan ka faa'iideysaneynaa xogtan qiimaha leh si aan u bilowno dhisidda tusaalahaaga saadaalin ah.
Mintigo wuxuu ku darayaa waxay ogyihiin, isagoo kudaraya kumanaan tilmaamayaasha suuqgeynta internetka. Mintigo waxay uruurisaa oo si joogto ah u cusbooneysiisaa kumanaan dhibco xog ah oo ku saabsan malaayiin shirkado ah. Macluumaadkan waxaa ka mid ah macluumaadka dadweynaha ee dhaqaalaha, shaqaalaha, shaqaalaynta, teknoolojiyada, suuq geynta iyo tabaha iibka iyo sidoo kale falanqaynta macnaha ee raadadka dhijitaalka ah ee shirkadda. Natiijada - muuqaal 360-degree ah oo hogaamiye kastaa ku jiro keydka xogtaada.
Mintigo khuseysaa saadaalin Analytics, oo ku xoqaysa xog aad u tiro badan oo leh barashada mashiinka si loo jajabiyo CustomerDNA ™. Mintigo waxay kaa qaadeysaa xogtaada, xogtayada, iyo qiimahaaga ugu sareeya waxay hogaamineysaa waxayna u adeegsaneysaa barashada mashiinka si loo helo CustomerDNA ™, oo ah tilmaamayaasha ka dhigaya kuwa iyaga u gaar ah marka la barbar dhigo dhamaan hogaamiyaasha kale ee keydkaaga. Natiijadu waa tilmaamayaal iyo qaab goolal dhalineed oo saadaalin kara suurtagalnimada in wax la beddelo.
Mintigo dhibcaha keydka xogtaada, adoo aqoonsanaya tilmaamahaaga ugu qiimaha badan. Mintigo waxay u isticmaashaa qaabkaada gooldhalinta ee saadaalinta gaarka ah si aad uhesho raadadkaaga jira iyo hogaamiye kasta oo gala mashiinkaaga Nidaamka Suuqgeynta iyo Iibka sida Eloqua, Marketo iyo Salesforce.com. Tani waxay saameyn toos ah ku leedahay dakhligaaga - Hadda waad ogtahay taas oo horseedaysa in si toos ah loogu diro Iibsashada iyo kuwa sii kobcinaya.
Mintigo waxay asal ahaan ku dhexjirtaa daruuraha Suuqgeynta Oracle
Mintigo waxay ka caawisaa suuqleyda inay dhakhso u iibsadaan iyagoo adeegsanaya saadaalin Analytics. Waxaad caqli ahaan u kala hormarin kartaa mug badan oo hogaamiyaal ah waxaadna abuuri kartaa ololeyaal shaqsiyeed adiga oo gacanta ku buuxiya qasabno.
Ka soo qaad in aad dhammeystirtay dib u qaabeynta foomamkaaga iyo bogagga degitaanka. Wax walba waxay u muuqdaan kuwo kufiican bilowga boggaaga cusub iyo kooxdaada suuqgeynta ayaa ku faraxsan. Ololaha aad hadda abuurtay, waxaad ku abuuri doontaa hoggaan waqti aan dheeri lahayn. Eloqua wuxuu ka dhigayaa nidaamkan mid fudud. Hadda, maxaa xigi doona?
￼￼Mintigo waxay soo saartay is dhexgal gaar ah iyadoo la adeegsanayo cusub ee 'Eloqua' Oracle Suuqgeynta AppCloud, Keenista Suuqgeynta Saadaasha Eloqua markii ugu horeysay adiga oo kuu oggolaanaya inaad sameyso go'aanno xogo dhaqsi leh isla markiiba
Mintigo waxay kobcisaa awoodda xogta weyn iyo saadaalinta Analytics si kor loogu qaado suuqgeyntaada. Mintigo waxay awood kuu siineysaa inaad ku dhisato moodallo goolal la saadaalin karo ee suuq kasta oo bartilmaameedkaaga ah. Qaab kasta oo saadaalin ah, Mintigo waxay ururinaysaa xogtaada taariikhiga ah si loo dhiso qaabka ugu adag.
Marka la eego dhibcaha iyo saadaasha Mintigo ee saadaalinta waxaad ku hubin kartaa inaad diirada saarto xiriirada saxda ah, adiga oo awood kuu siinaya inaad si dhakhso leh u hesho iibsadayaasha.
Haatan Mintigo's suuqgeynta cusub ee Oracle Suuq-geynta AppCloud, markasta oo aad rabto inaad sameyso go'aan saadaalin ah kaliya ku jiido Mintigo Waxqabadkeeda Ololaha Canvas Si fudud u dheji Mintigo's Action block si aad u dhaliso natiijooyinkaaga soo galaya qaababka saxda ah waxaadna isla markiiba heli doontaa dhibco saadaalin ah Eloqua marka aad ololaha wado. Intaas waxaa sii dheer, Mintigo wuxuu sidoo kale riixayaa tilmaamayaasha suuqgeynta aad dooratid Eloqua, taasoo u oggolaaneysa qeyb casri ah iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan iibka iibka.
Mintigo wuxuu noqon doonaa kontoroolaha taraafikada hawada ee otomaatigaaga suuq geynta Eloqua. Marka hore, waad hubin kartaa in xiriirada dhibcaha ugu sareeya ay qaataan tareenka rasaasta isla markaana ay si dhakhso leh ugu helaan kooxdaada iibka. Marka labaad, waad hagaajin kartaa ololahaaga oo aad kobcin kartaa raadadka si aad ula jaanqaadi karto dhagaystayaashaada iyada oo ku saleysan tilmaamayaasha suuqgeynta ee Mintigo.
'Eloqua' iyo 'Mintigo' waxaad ku hubin kartaa inaad u marto habka ugu wanaagsan ee xiriir kasta adiga oo hagaajinaya farriintaada iyo natiijooyinka khadka hoose.
Tags: dhibcaha hogaanka crmcodkarnimodhibcaha hogaanka shirkadaHeather adamsLinkedInsuuqomintigodaneeyeOracleOracle Suuqgeynta AppClouddaruuraha suuq geynta oracledhalinta hogaankaiibinSalesforce.com